Induction tempering yinkqubo yokufudumeza eyandisa iipropathi zoomatshini ezinje ngokuqina kunye nokuqina
kwimisebenzi esebenzile kakade.
Olona ncedo luphambili lokungenisa umlilo kwiziko lobushushu sisantya. Ukuchithwa kunokubangela ukuba umsebenzi usebenze ngemizuzu, ngamanye amaxesha kunye nemizuzwana. Izithando zomlilo zithatha iiyure. Kwaye njengoko ukufakwa kwe-tempering kufezekile kulungelelwaniso lwangaphakathi, kunciphisa inani lezinto kwinkqubo. Induction tempering iququzelela ukulawulwa komgangatho wobugcisa bomntu ngamnye. Izikhululo zomoya zokungenisa ezihlanganisiweyo zikonga indawo enexabiso.
Induction tempering iqeshwe ngokubanzi kwishishini leemoto ukukhawulezisa izinto ezomeleleyo zomhlaba ezinje ngeeshafts, imivalo kunye namalungu. Le nkqubo ikwasetyenziswa kushishino lweetyhubhu kunye nemibhobho ukubacaphukisa ngezinto zokusebenza ezinzima. Ukuchithwa kwe-induction ngamanye amaxesha kwenziwa kwisikhululo sokuqina, ngamanye amaxesha kwesinye okanye kwizikhululo ezahlukeneyo zomsindo.
Gcwalisa iinkqubo zeHardLine zilungele usetyenziso oluninzi lobushushu. Isibonelelo esiyintloko seenkqubo ezinjalo kukuba lukhuni kunye nokubila kwenziwa ngomatshini omnye. Oku kuhambisa ixesha elibalulekileyo kunye neendleko zokonga kwi-footprint encinci xa kuthelekiswa nezinye iitekhnoloji. Ngomlilo, umzekelo, iziko elinye lihlala liqala liqinise imisebenzi, libe neziko elahlukileyo
emva koko isetyenziselwa ukufutha. I-solid state DAWEI I-Induction Heating Systems zikwasetyenziselwa ukufakwa kwezicelo.
iindidi FAQ tags ukuvutha kwexesha eliphezulu, ukutyunjwa, ukutyhutyulwa komhlaba, RF yokunyanga, ukucutha, ukufudumala ukushisa Post yokukhangela